ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် Unipathway ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ချေ (2018) ။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုပုံစံကိုသုံးသပ်ခြင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် Unipathway ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ (2018) ။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း)
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019, အတှဲ 48, ပြ2နာ ၂, စစ 455-460 |
(ဒီ Commentary ခုနှစ်တွင်, အလိုရှိ Grubbs, ပယ်ရီတို့ကဖုံးလွှမ်းသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၌ငါ့နောက်ခံနှင့်သုတေသနအကျိုးစီးပွား၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးအပြီးနှင့်ရိဒ်ရဲ့2018ကိုယ်ကျင့်တရား Incongruence မော်ဒယ်ကြောင့်) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပြဿနာများ (PPMI), ငါဟာ PPMI ၏သဘောတရား, သူတို့ရဲ့အယူအဆရေးရာမျှတမှု, သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုပြန်လည်သုံးသပ်။ ငါထို့နောက်စဉ်းစားရန်၎င်း၏ developer များအဘို့ PPMI အကြောင်းကိုငါးခုမေးခွန်းများကို (ဆက်စပ် Sub-မေးခွန်းများကိုနှင့်အတူ) တင်ပြသည်။ တိကျတဲ့ "ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence" လမ်းကြောင်း၏မော်ဒယ်ရဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့ unipathway ချဉ်းကပ်ခြင်းရှိမရှိ, ဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုအစဉျအမွဲအရေအတွက်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ပါလျှင်ဤပုံစံလမ်းကြောင်းတစ်ဦး "Amore ကတိကဝတ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းပြဿနာများ၏ငြင်းပယ်" စဉ်းစားသင့်ရှိမရှိနှင့်အတူပြုကြရန်ရှိသည် လက်ရှိ Dual-လမ်းကြောင်းချဉ်းကပ်မှု, ကုသမှုများအတွက်မော်ဒယ်များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အလားအလာအတိုင်းအတာများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဦးစားပေးမည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ PPMI Self-ရိပ်မိအမျိုးမျိုးမှတိုးချဲ့ဖို့မျှော်လင့်နေချိန်မှာဒီအရှိဆုံးသုတေသနများ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့အရှိဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပြီးသော variable ကိုဖြစ်သကဲ့သို့ "ညစ်ညမ်းပြဿနာများ," ငါရိပ်မိ၏ညစ်ညမ်းစွဲအာရုံစိုက်ပါ။
(1) တူညီသောအထူးဝေမျှသူကို (2) အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များ, (3) ဧရိယာအတွက်အထူးပြုဘူးသောသူသည်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များ, ဒါပေမယ့်သူကတစ်ဦးအကျိုးစီးပွားရှိသည်,: တစ်အထူးသဖြင့်ဧရိယာ၌သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနသုံး generalized ပရိသတ်တွေရှိသည်ဟုဆိုနိုငျ စိတ်ဝင်စားသူအများပြည်သူ (ဥပမာ, ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ, သိပ္ပံစာရေးဆရာများ) ။ တူညီသောဧရိယာ၌အထူးပြုတဲ့သူခငျြးကိုသိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်၏အရေးပါမှုကို Self-ထင်ရှားခြင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်များရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထင်ဟပ်။ ဤအမဲဆန္ဒနယ်ဖတ်အနက်ကိုဘော်ပြ, ဆွေးနွေးပါနှင့်အလားအလာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်သုတေသနများကထိခိုက်နေကြသည်အဖြစ်ဧရိယာ၌အထူးပြုကြဘူးသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြသည်မဟုတ်သူတို့ထံမှတုံ့ပြန်ချက်သို့သော်လည်းအရေးကြီးပါသည်။
အကြှနျုပျ၏ Ph.D ဘွဲ့ကို အသေးစားလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်မိသားစုလေ့လာမှုများ၌ရှိ၏, ငါဖတ်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်, လူမှုရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံဒေသများအမျိုးမျိုး၌သွန်သင်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆိုးကျိုးများ (ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့, ဆက်သွယ်ရေးသီအိုရီ, ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အဓိကကျသည့်ဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်သခင်) တွင်အဓိကအားဖြစ်ကြသည်။ ငါ dysregulated လိင်၏ဧရိယာ၌ထုတ်ဝေခဲ့ကြပေမယ့်အဲဒီလေ့လာမှုများ, ဥပမာ (ကျန်းမာရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့ဒိုင်းနမစ်အပေါ် Wright အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ 2010, 2011; Wright & McKinley, 2010) ။ ထိုနည်းတူစွာအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းငါ၏အသုတေသန (ဥပမာ Wright ၏ပုံမှန် Focal Point သည်ဖြစ်ပြီး, 2018; Wright, ဘေ, & Funk, 2013; Wright, Sun, & Steffen, 2018), ငါလူမှုရေး, မဟုတ် dysregulation အတွက်အထူးပြု။ ငါ PPMI ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသည့်အကြောင်းအရာများစိတ်ဝင်စားမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်ဖြစ်လျှင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွဲခြား, ဒါပေမယ့်မကျွမ်းကျင်သူ။ ငါသူတို့သည်ငါ၏ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်လျက်, PPMI ၏စာရေးဆရာများဆိုနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုငါ၏မရှိခြင်းထင်ဟပ်ထုတ်ပြန်ချက်များအဘို့ငါနှင့်အတူအသည်းခံခြင်းရှိသည်စဉ်းစားပါအတိုင်းဤဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏စာဖတ်သူများစိတ်ထဲ၌ဤစောင့်ရှောက်သောမေးကြည့်ပါ။ အဆုံးစွန်သောနှင့်စပ်လျဉ်းငါသည်လည်းငါအပိုင်းအစကိုဖတ်ရှုကြလိမ့်မည်နှင့်စိတ်ဝင်စားပရိသတ်ကို၏ဤအပိုင်းကိုအကြားတွင်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်ထပ်မံနားလည်မှုတစ်ခုအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ငါ၏အဝေဖန်ဖို့သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်စဉ်းစားရန်အဘယ်သူသည်ဆင်တူသည် non-ကျွမ်းကျင်သူများ၏သင်္ကေတဖြစ်စေခြင်းငှါသတိရဖို့ PPMI developer များအားပေး ။
PPMI သည်ဘာသာတရားများ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုတို့အကြားရိုးရှင်းသောဆက်နွယ်မှုများရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာမော်ဒယ်ကပုံမှန်စားသုံးမှုကြောင့်အချို့သောလူများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းနေသည်ဟုထင်မြင်စေသင့်သည်ဟုပြောဆိုသည် Cooper, Young နှင့်အခြားသူများ၏သီအိုရီဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုနေစဉ်မျက်မှောက်ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကို ဦး တည်စေသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သောအချက်များနှင့်မည်သို့ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း (Cooper, Delmonico, & Burg, 2000; လူငယ်တို့, 2008Self-ဖော်ထုတ်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်သူတို့ထံမှအကူအညီကိုရှာအံ့သောငှါအဘယ်သူ Clinician အဖြစ်အချို့သောအရေအတွက်ဒေတာများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သေခံချက်၏စည်းစိမ်ကိုရန်), အ PPMI အချက်များ (ဥပမာ, ရိဒ် et al ။ , 2012), သူတို့ရဲ့အပြုအမူကုသိုလ်ကံပါလျှင်အဖြစ်မခံစားရဘူးသောသူညစ်ညမ်း၏မကြာခဏနှင့်ပြင်းထန်သောအသုံးပြုသူများကရှိပါတယ်ငြင်းခုန်ရန်။ ဒါဟာအင်တာနက်ကပေးညစ်ညမ်းဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့အတားအဆီး-အခမဲ့ access ကို, ကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များ, အော်ဂဇင်ကနေရရှိလာတဲ့အတွက်ဇီဝကမ္မဆုလာဘ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲအကြားဆက်စပ်မှုအကြံပြုခြင်းအဖြေရှာတဲ့အညွှန်းကိန်းကိုပြောင်းလဲလိင်စိတ်နိုးထများ၏စွမ်းရည်ကိုအားပေးတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အယူအဆပုံရသည် အခြားအ evolutionarily ဆက်စပ်ဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်းထိုကဲ့သို့ "လောင်းကစားဝိုင်းစွဲသို့မဟုတ် compulsive လောင်းကစားဝိုင်း" အဖြစ် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာအမူအကျင့်စွဲလမ်း (American Psychiatric Association, 2016; လီ, ဗန် Vugt, & Colarelli, 2018; Spinella, 2003) ။ အဆိုပါရရှိနိုင်သည့်ဒေတာ Self-ရိပ်မိစွဲအပြုသဘောညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအတူအလယ်အလတ်အဆင့်မှာ correlating နှင့်အတူ, ဒီ PPMI ခန့်မှန်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် PPMI ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအကြား၊ ဘာသာရေးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီးကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုသည်လူတစ် ဦး ၏အပြုအမူသည်စွဲလမ်းနေသည်ဟူသောခံစားချက်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဘာသာရေးအရအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အတူကမ္ဘာ့လူပုဂ္ဂိုလ်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုလက်ခံခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် (Arterburn, Stoeker, & Yorkey, 2009; Dallas မြို့, 2009; ပေါလုက, 2007; Weinberg၊ Williams၊ Kleiner နှင့် Irizarry၊ 2010), ကပိုမိုမြင့်မားစျယာနျဘာသာတရားကိုပိုမိုမြင့်မားကငျြ့ဝတျ incongruence ကိုက်ညီတဲ့မယ်လို့အလိုလိုသိသည်။ ဒါဟာထပ်တလဲလဲတဦးတည်းအားပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်တဲ့အပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး (စွဲဖြစ်ခြင်း၏ဆိုလိုသည်မှာ,) nonvolition တစ်ဦးခံစားချက်ကလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းအလိုလိုသိသည်။ အဆိုပါရရှိနိုင်ပါဒေတာများကိုလည်းစျယာနျဘာသာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကငျြ့ဝတျ incongruence နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် Self-ရိပ်မိစွဲခန့်မှန်းကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ခန့်မှန်းအတူဤ PPMI ဟောကိန်းများထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံးတော့တတိယနဲ့, အ PPMI ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence စားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းထက် Self-ရိပ်မိစွဲလမ်းတစ်အားကောင်းခန့်မှန်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ဤသည်ကိုလည်းသုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ယုတ္တိအငြင်းအခုံဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာကျင့်ယိုယွင်း၏သဘောထားအမြင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏သဘောထားအမြင် (သူတို့အန္တရာယ်အဖြစ်သူတို့ကိုရိပ်မိသည့်အခါဆိုလိုသည်မှာ, လူတွေသာ "အကျင့်ပျက်" အဖြစ်အပြုအမူတွေကိုဖော်ထုတ်ရန်) နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျန်းမာရေးနှင့် Self-အကူအညီနဲ့အဖွဲ့အစည်းများနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်မကြာခဏသူတို့အဖြေရှာတဲ့စံ (အရက်အမည်မသိအတွက်အမူအကျင့်အကြိမ်ရေဖော်ပြထားခြင်းအဖြစ်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များကြားမှတစ်ဦးအမူအကျင့်များဆက်လက်ဖော်ပြ 2018; အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး, 2016; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2018) ။ တတိယအချက်ကြောင့်မကြာခဏ Lancer ( "ငြင်းပယ်စွဲ၏အမာခံများက" ယောဂီတို့ကဆိုပါတယ် 2017-ie, များစွာသောမကြာခဏအသုံးပြုသူများကို) ငြင်းပယ်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ synthesize ၎င်းထိုသို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အဖြစ်အပြုအမူများ၏မှတ်ပုံတင် inextricably ထိခိုက်မှုများနှင့်အကျင့်ယိုယွင်းတစ်ခုစွဲခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ကသိမြင်လျှင်များအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် (1) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ပိုပြီးအားကောင်းအပြုအမူကြိမ်နှုန်းထက် Self-ရိပ်မိစွဲကြိုတင်ခန့်မှန်းမညျဖွစျကွောငျး hypothesize မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည် သူတို့လုပ်ရပ်တွေက (Weiss ၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုငြင်းပယ်အတွက်ကြောင့်အများအပြားစွဲကဲ့သို့သောသူတို့ကိုယ်သူတို့မရိပ်မိကြဘူးကုသသည်နှင့်အညီနှင့်ဆက်စပ်နှင့် (2), 2015) ။ ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့် Self-ရိပ်မိစွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့များစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းနှင့် Self-ရိပ်မိစွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့များထက်ခွန်အားကြီးဖြစ်ရပြီအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါဒေတာများကိုလည်း, ဒီ PPMI ခန့်မှန်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ပေါင်းလဒ်မှာ PPMI မော်ဒယ်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်များဘယ်လိုစျယာနျဘာသာတရားကို, ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် Self-ရိပ်မိစွဲ intercorrelate, နှင့်ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာထောက်ခံမှုတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုယူဆချက်တစ်ခုယုတ္တိနှင့်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းတသမတ်တည်းထားသဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ယခင်ကဖော်ပြထားကြောင့်အကျင့်ယိုယွင်း၏အမြင်မှဦးဆောင်သူတို့ကအန္တရာယ်အဖြစ်၎င်းတို့၏အပြုအမူရိပ်မိလျှင်တစ်ခုစွဲတစ်ဦးချင်းစီသာကဲ့သို့သော Self-ခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်ထိခိုက်မှုများအမြင်ပါပဲ။ အဆိုပါ PPMI အချို့သောဘုရားကိုကိုးကွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီကိုပင်အနည်းငယ်အလိုလိုကျလှနျးခွငျးသူတို့၏အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ထဲကတဖြည်းဖြည်းသောမမှန်ကန်နိဂုံးချုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါဒါအန္တရာယ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းရိပ်မိကြောင်း posits ။ ယင်းအမှုများ anti-ညစ်ညမ်းကငျြ့တရားကတိကဝတ်ကြောင့် Self-အဖြေရှာတဲ့ false positives ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
သို့သော်အဆက်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးကော။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟုရှုမြင်သူများကဲ့သို့ပင်တန်းတူရည်တူအယူအဆရှိသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုအငြင်းပွားစရာ၊ ချက်ချင်းတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မည်သည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိမည်မဟုတ်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုကြသည်။ , Seaman, & Linz၊ 2014; Linz & Malamuth, 1993) ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းများ၏အန္တရာယ်မှအယူဝါဒအကျူးလွန်သည်ဆိုပါက, ကသူတို့နှင့်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းမရှိထက်အခြားဘာမှ၎င်းတို့၏ dysregulated စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြားသူတွေဖို့ပျက်ဆီး attribute မယ်လို့နောက်သို့မလိုက်သနည်း? ဤရွေ့ကားလူပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ဦးလိုလားသူညစ်ညမ်း Amore ကတိကဝတ်ကြောင့် Self-အဖြေရှာတဲ့မှားယွင်းသောဆိုးကျိုးဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
အစဉျအမွဲ Incongruent Pathways?
အဆိုပါ PPMI ညစ်ညမ်းစွဲ၏ Self-အမြင်နှစ်ခုလမ်းကြောင်း posits ။ ပထမဦးဆုံးလမ်းကြောင်းများတွင်ညစ်ညမ်း၏တစ်ဦးချင်းရဲ့အအသုံးပြုမှုကိုသူတို့ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်ကောက်ချက်ချပေမယ့်ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့် dysregulated ဒါသိသာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယလမ်းကြောင်းများတွင်တစ်ဦးချင်းညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား compunction ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုရန်ဆက်လက်လျက်, သူတို့ကငျြ့တရားနဲ့သူတို့ရဲ့အပြုအမူအကြားကဒီကွာဟမှုစွဲ၏ Self-အမြင်စေပါတယ်။
ဤဒုတိယလမ်းကြောင်းကို“ ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ” ဟုခေါ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သတ်၍ လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့စွဲလမ်းနေသည်ဟုထင်မြင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီခြင်း” လမ်းကြောင်းကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း“ ဘဏ္financialာရေးမညီညွတ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ”၊ “ ဆက်နွယ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြproblemsနာများ” နှင့်“ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြproblemsနာများ” စသည့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလမ်းကြောင်းများလိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိသည်။ (Carnes, Delmonico, & Griffin, 2009; Schneider & Weiss, 2001) ။ သူတို့ကအခပေးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစာရင်းပေးသွင်းစောင့်ရှောက်ပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ဘဏ္ဍာရေး incongruence လမ်းကြောင်းများတွင်လူတစ်ဦးထိန်းချုပ်မှုထဲကအဖြစ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ် မိ. ။ ဆက်ဆံရေး incongruence လမ်းကြောင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်၎င်းတို့၏အပြုအမူဆက်ရှိနေသေးလျှင်သူတို့ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်ထဲကအဖြစ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ် မိ. , ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဆုံးမှဆက်ဆံရေးလိုသောမကြားမှဆက်သုံးပါ။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ် incongruence လမ်းကြောင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်မှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဆန့်ကျင်တဲ့မူဝါဒကိုမရှိတယ်ကြောင့်လူတစ်ဦးထိန်းချုပ်မှုထဲကအဖြစ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ် မိ. , ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်။
ဤရွေ့ကားဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းတဲ့လူတစ်ဦး၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားကွာဟမှုများနှင့်သူတို့ကညစ်ညမ်းလျက်ရှိ၏ခံစားချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်နိုင်သည်ကြည့်ရှုမဖြစ်သင့်ဘယျကွောငျ့အများအတွက်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များသာအနည်းငယ်တတ်နိုင်သမျှဥပမာ "စွဲ။ " ကှာဟဘို့များစွာသောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေဇစ်မြစ်ရှိပါတယ်ပေး , မေးခွန်းပုံစံအဆောက်အဦးချဉ်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု incongruence ၏တစ်ဦးချင်းစီသီးခြားအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုလမ်းကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအဖြစ်ပေါ်ပေါက်။
ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်လူကြိုက်များတဲ့မီဒီယာနှင့်လောကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းညစ်ညမ်း၏တိုးပွားလာပုံမှန်ပေးသော, ပြဿနာစွဲလမ်းအပြုအမူအသေးအဖွဲအတွက်ငြင်းပယ်၏အခန်းကဏ္ဍကို, နှင့်အလေးပေးဘာသာတရားမြားစှာနှင့်ဘာသာရေးအုပ်စုများညစ်ညမ်းများ၏ပျက်ဆီးအပေါ်နေရာက dysregulated ဘာသာရေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုရိုးရှင်းစွာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင် ဘာသာရေးမဟုတ်သော dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ထက်မိမိတို့၏အပြုအမူများပြီးသားအတွေ့အကြုံနှင့်အလားအလာရှိသောအနာဂတ်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့? ဘာသာရေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (အမှန်တကယ်နှင့်အလားအလာရှိသော) အန္တရာယ်များ၏သဘောပေါက်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့အပြုအမူများဆက်လက်သောအခါ, သူတို့ nonreligious ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ထက်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများ၏စွဲလမ်းအလားအလာဝန်ခံဖို့ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ကြောင်း? အဆိုပါစွဲပြန်လည်နာလန်ထူစာပေအတွက်ဘုံတစ်ဝေါဟာရကိုသုံးပြီး rephrase ၎င်းထိုသို့ dysregulated ဘာသာရေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုရိုးရှင်းစွာပိုပြီးသူတို့ "အောက်ခြေ hit" ပြီဟုဝန်ခံဖို့များပါတယ်နှင့် dysregulated nonreligious ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ထက်အကူအညီလိုအပျကွောငျးဖြစ်နိုင်သောပါသလဲ
ဤထင်မြင်ချက်သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ခံစားချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယူဆထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့၏အပြုအမူများသည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုယူမှတ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အကျင့်ယိုယွင်းမှုဟုသတ်မှတ်သည်။ လူအများကသူတို့၏အပြုအမူသည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း၎င်းသည်ဆက်လက်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေလျှင်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အများအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်းအဆိုပြုထားသည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကို“ အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏သိစိတ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်” နှင့်“ အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားမှားယွင်းသည်ဟုယုံကြည်သည်” (Grubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle) ကဲ့သို့သောမေးခွန်းများဖြင့်တိုင်းတာသည်။ 2015) ။ ညစ်ညမ်းအပေါ်ဘာသာရေးရှုထောင့်ပျက်ဆီး (ဥပမာ relational နှောင့်အယှက်အမျိုးမျိုးကိုအလေးပေးကတည်းကအဲဒီနှငျ့ပတျသကျသောလူမျိုး, ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှု-Foubert အပါအဝင် virility, Self-ဗဟိုပြု, ရန်လိုသဘောထားတွေ, မိန်းမတို့အဘို့လျှော့ချသနားခြင်းကရုဏာစိတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျပုံစံ၏ဝါဒဖြန့်, လျော့နည်းသွား 2017), dysregulated ဘာသာရေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုပိုပြီးအလွယ်တကူ nonreligious ထက်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များများအတွက်အလားအလာအသိအမှတ်မပြုပေမည်။ စွဲခံနေရ၏အမြင် hastens ထို့နောက်ထိခိုက်မှုများအတွက်ယင်း၏စွမ်းရည်အသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်ရိပ်မိဘဲလျက်ရှိနေသော်လည်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်။ တချို့က dysregulated nonreligious ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကနောက်ဆုံးမှာအတူတူပင်နိဂုံးချုပ်ဖို့လာလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်သောနှင့်ကြာကြာကြာချိန်၏ဖြစ်လို, သူတို့ကပိုတာတော့သေချာတယ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများတွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ပေါင်းလဒ်အတွက်, ဒီ Commentary စျယာနျဘာသာတရားကို, ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုပါဝင်သော Self-ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ချဉ်းကပ်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်ပေမယ်တစ်ခုတည်းလမ်းကြောင်း (ပုံကိုကြည့်ပါ posits ။ 1) ။ အချို့သောတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေ, သို့သော်ဤ dysregulation အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိထိခိုက်မှု၏သဘောထားအမြင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အန္တရာယ်၏သဘောထားအမြင်, အလှည့်၌, ယာနျဘာသာတရားကိုအဖြစ်တခြားသူတွေကို Self-အသိအမြင်နှင့်စာနာမှုအားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ Self-သတိထားမိခြင်းနှင့်စာနာနေသော Dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အပြုအမူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများ၏အသက်တာကမည်ကဲ့သို့ကြည့်ဖို့မြန်ပါလိမ့်မည်။
Self-ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲနားလည်သဘောပေါက်ရန် unipathway ချဉ်းကပ်
Dual-လမ်းကြောင်းချဉ်းကပ်ကုသမှုများအတွက်မျှော်လင့်ချက်များကွဲပြားခြားနားစေပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးလမ်းကြောင်း (အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအမှန်တကယ်ချိုးဖောက်သောလူများ) သည်လူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အေဂျင်စီအားသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်အစီအစဉ်အချို့လိုအပ်သည်။ “ လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကုထုံး” ချဉ်းကပ်မှု (Twohig & Crosby, 2010) ကိုပစ်မှတ်အပိုဒ်အတွက်ဖော်ထုတ်ပေမယ့်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ကတိပေး Avenue နဲ့တူပုံရသည်။ ဆက်သွယ်ရေး to-peer-Peer အဖြစ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ပိုမိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည်သူကိုအခြားသူများထံမှလမ်းညွှန်သည်လည်း, (Wright ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည် 2010).
လူတွေဒုတိယလမ်းကြောင်းထဲသို့ကျသူကိုခံယူမယ်လို့ကုသမှု (အဘယ်သူ၏ညစ်ညမ်းစွဲ၏သဘောထားအမြင်ကငျြ့ဝတျ incongruence ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်မှာ, လူတွေ) လျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသြတ္တပ္ပစိတ်ကိုနှောက်ယှက်တဲ့အပြုအမူများတွင်ပါဝင်နေသည့်အခါသူတို့နှစ်ဦးကိုရှေးခယျြမှုရှိသည်: မိမိတို့၏အပြုအမူကိုက်ညီသို့မဟုတ်မိမိတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားကိုက်ညီဖို့သူတို့ရဲ့အပြုအမူတိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလျှော့ချ။ အဆိုပါပစ်မှတ်အပိုဒ်ဤအရာနှစ်ခုလုံးကိုရှေးခယျြစရာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုပုံရသည်။ ယခင်နှင့်စပ်လျဉ်းဆောင်းပါး "ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆက်စပ်သောပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခ၏ resolution ကို။ " အကြံပြုအဆုံးစွန်နှင့်စပ်လျဉ်းဆောင်းပါး "တန်ဖိုးအရတော့အပြုအမူပုံစံများမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု။ " အကြံပြုကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကုဒ်လိင်သောဘာသာရေးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖိနှိပ်သောသူတို့သည်လည်းညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလက်ခံသင့်တယ်, Clinician ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ဘာသာရေးလူတွေကိုကူညီနှင့်အတူထွက်ခွာနေကြသည်။ သို့သော်ဘာသာရေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူလက်တွေ့အကူအညီများကိုရှာတတ်၏အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံကသူတို့ပြီးသားအကြိမ်ပေါင်းများစွာရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည်ကိုပြန်လည် dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဘာသာရေးနှင့် nonreligious ဒီဂရီအတွက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသော unipathway ချဉ်းကပ်မှု, ရန် Commentary ဆောင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်ကြင်နာအလားတူနှင့်တဦးတည်းအဘို့ကောင်းသောသောအပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုယန္တရားများအခြားအတှကျကောငျးဖွစျလိမျ့မညျ (ဖြစ်ကောင်းအတွက်ပေမယ့် ) ကို nonreligious နှင့်ဘာသာရေးအဘို့အဝိညာဏအဘို့လောကဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များ။
ဘာသာရေးလူတစ်ဦးရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကုသိုလ်ကံနှင့်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးခဲ့နှင့်၎င်းတို့၏သာဒေနာပဋိပက္ခသြတ္တပ္ပစိတ်ရှိလျှင်, ကုသမှုသင်တန်းအတော်လေးအကျဉ်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင် client ကိုအားဖြင့်တင်ပြလျက်ရှိ၏ အဆိုပါ Clinician "သင်နှောင့်အယှက်ဆိုပါကမလုပ်ကြပါဘူး" ဟုပြောနှင့်ကုသမှု၏သင်တန်းကောက်ချက်ချသည်။ အဆိုပါပစ်မှတ်အပိုဒ်, ဤအမြိုးအစားသို့ဘာသာရေးပြိုလဲနေသောအများအပြားထိုကဲ့သို့သော Self-ရိပ်မိစွဲအကြံပြုအဖြစ်လြှငျ, ဤသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအမူအကျင့်တွေအကြောင်းမကောင်းတဲ့မခံစားရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကလောက်သငျ့သညျကိုရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ one- သို့မဟုတ်နှစ်ခု-ဝါကျသတိပေးချက်။ အားလုံးဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလုပ်လုပ်တဲ့လူနေမှုများအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ပြီး, အသုံးပြုသူရဲ့ဒီအမျိုးအစားကသူတို့ဘာသာရေးအရသွေးဆောင်လိင်ဆက်ဆံအပြစ်ရှိတယ်ရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့၏အပြုအမူစုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားကုသမှုအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Target Article ဖတ်နေစဉ်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်သုံးခုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာ meta-analysis သည်ဖွဲ့စည်းသည့်လေ့လာမှုအတော်များများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအစီအမံများသည်ကဏ္sectionပေါင်းစုံလေ့လာခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမှုကိုပြသခဲ့ပြီး longitudinal လေ့လာမှုများစွာတွင်စမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုပမာဏသည်အရာဝတ္ထုမျိုးစုံရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတန်ဖိုးများမှအနည်းငယ်လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ အစီအမံများအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် meta-analytic ရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်မိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းမှုအကြားဆက်နွယ်မှု၏အစွမ်းအစစ်အမှန်အားအနည်းငယ်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်နိုင်သည် (Wright, Tokunaga, Kraus, & Klann, 2017) ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ရလဒ်ပုံစံအရသင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရာတွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဟုအကြံပြုသော်လည်း၎င်းကိုဤမေးခွန်းများမတိုင်မီမေးခွန်းပုံစံများတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသင့်သည်။ ပါ ၀ င်သူများက“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြည့်တာကကိုယ်ကျင့်တရားမှားတယ်” စတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေတဲ့အခါသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးတာကိုပိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ လူတို့သည်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော်လည်းအခြားသူများ၏အသုံးပြုမှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလျှင်၎င်းသည်ပြaticနာဖြစ်နိုင်သည် (Rojas, Shah, & Faber, 1996) ။ , တတိယအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မရှိခြင်းပြန်ဆိုသောအခါ, ကပြန်လည်နာလန်ထူအများအပြားပုဂ္ဂိုလ်များဟာထားသောစာပိုဒ်တိုများလိုက်နာသည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည် "ဟုစှဲလမျးသူတစ်ချိန်ကအမြဲတမ်းတစ်ဦးစှဲလမျးသူ" (Louie 2016) ။ တရားဝင်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုရှိသူများနှင့်တရားဝင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းမရှိသူများသည်ဤဂါထာနှင့် ပါတ်သက်၍ လေ့လာပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသော“ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်” ကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုအဖြေမှန်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီအပြင်စွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံအများစုသည်အပြုအမူဆိုင်ရာအကြိမ်ရေထက်အကျိုးဆက်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်ပြီးထိန်းချုပ်ခြင်းဟူသောအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိမိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေကိုနောင်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ (Grubbs, Wilt, Exline, & စာချုပ် 2018).
အဆိုပါ PPMI မော်ဒယ်သဘောတရားများနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို, ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် Self-ရိပ်မိစွဲအပေါ်သုတေသနတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အရေးကြီးသောပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Commentary အဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်များအတွက်မော်ဒယ်၏မူလခြီးမှမျးနှင့်အနာဂတ် theorizing နှင့်သုတေသနတို့အတွက်အချို့ဖြစ်နိုင်သောအတွေးအခေါ်များပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားခြင်းနှင့်ကူညီပေးဖို့ဘယ်လိုသုတေသီများနှင့်ပညာရှင်များအကြားအမြင်များ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမတူကွဲပြားမှုနှင့်အတူဒွန်တွဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူ, အဖြစ် ပို. ပို. အဖြစ်များ Self-ဖော်ထုတ်ခြင်း, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့စညျးလုံးအလုပ်မြင့်မားသောဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်ပြုလုပ်တောင်းဆိုနေပြီ။
အရက်သမားအမည်မသိ။ (2018) ။ သင်တို့အဘို့အ AA ကိုလား? မှရယူရန် www.aa.org.
American Psychiatric Association ။ (2016) ။ လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါဆိုတာဘာလဲ? မှရယူရန် www.psychiatry.org/patients-families/gambling-disorder/what-is-gambling-disorder.
Arterburn, အက်စ်, Stoeker, အက်ဖ်, & Yorkey, အမ် (2009) ။ အသီးအသီးရဲ့စစ်တိုက်: တစ်အချိန်တွင်လိင်ပိုင်းသွေးဆောင်မှုတစျခုအောင်ပွဲအပေါ်စစ်ပွဲအနိုင်ရရှိမှု။ ကော်လိုရာဒို Springs, CO: WaterBrook နှိပ်ပါ။Google Scholar
Carnes, PJ, Delmonico, DL, & Griffin, အီး (2009) ။ ပိုက်ကွန်၏အရိပ်မှာတော့: compulsive အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခမဲ့ Breaking။ Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ။Google Scholar
Cooper က, အေ, Delmonico, DL, & Burg, R. (2000) ။ Cybersex အသုံးပြုသူများ၊ အလွဲသုံးစားပြုသူများ၊ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 7, 5-29 ။ https://doi.org/10.1080/1072016000.8400205.CrossRefGoogle Scholar
Dallas မြို့, ဂျေ (2009) ။ porn ကနေအခမဲ့ခြိုးဖောကျဖို့5ခြေလှမ်းများ။ ယူဂျင်း, OR: ရိတ်သိမ်းအိမ်ထုတ်ဝေ။Google Scholar
Foubert, JD (2017) ။ ဘယ်လိုညစ်ညမ်းပျက်ဆီး။ LifeRich in: Bloomington ။Google Scholar
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125-136 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-013-0257-z.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Grubbs, JB, Wilt, ဂျာ, Exline, JJ, & Pargament, KI (2018) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ကိုယ်တိုင်တင်ပြသော "စွဲလမ်းမှု" သည်အရေးပါပါသလား။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 82, 57-64 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.02.028.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Hald, GM က, Seaman, C တို့, & Linz, D. (2014) ။ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ။ DL Tolman & LM စိန် (Eds ။ ) တွင်, လိင်နှင့်စိတ်ပညာ၏ယားလက်စွဲစာအုပ် (စစ။ 3-35) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။Google Scholar
Lancer, ဃ (2017) ။ သငျသညျကိုခစျြတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအရက်သို့မဟုတ်စှဲလမျးသူဖြစ်တဲ့အခါ။ မှရယူရန် www.psychologytoday.com.
Li, NP, van Vugt, M. , & Colarelli, SM (2018) ။ အဆိုပါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မတိုက်ဆိုင်ယူဆချက်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံအဘို့အဂယက်ရိုက်။ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံအတွက်လက်ရှိဦးတည်, 27, 38-44 ။ https://doi.org/10.1177/0963721417731378.CrossRefGoogle Scholar
Linz, D. , & Malamuth, nm (1993) ။ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း။ Newbury ပန်းခြံ,, CA: Sage ။CrossRefGoogle Scholar
Louie, အက်စ် (2016) ။ အမြဲတစ်စှဲလမျးသူတစ်ဦးစှဲလမျးသူပြီးတာနဲ့။ မှရယူရန် www.psychologytoday.com.
ပေါလုက, P. (2007) ။ Pornified: ဘယ်လိုညစ်ညမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး, ငါတို့မိသားစုတွေကိုပြောင်းလဲနေသည်။ နယူးယောက်: ဇီးကွက်စာအုပ်။Google Scholar
ရိဒ်, RC, လက်သမား, BN, Hook, JN, Garos, အက်စ်, Manning, JC, Gilliland, R. , & Fong, တီ (2012) ။ hypersexual disorder အတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံစာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 9, 2868-2877 ။ https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02936.x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Rojas, အိပ်ချ်, Shah, DV, & Faber, RJ (1996) ။ အခြားသူများ၏အကျိုးအတွက် - ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်သုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 8, 163-186 ။ https://doi.org/10.1093/ijpor/8.2.163.CrossRefGoogle Scholar
Schneider, JP, & Weiss, R. (2001) ဘာထိတွေ့: ရိုးရှင်းသောစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်စွဲ? Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ။Google Scholar
Spinella, အမ် (2003) ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မတိုက်ဆိုင်, အာရုံကြောဆုလာဘ်ဆားကစ်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 113, 503-512 ။ https://doi.org/10.1080/00207450390162254.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Twohig, အမတ် & Crosby, JM (2010) ။ ပြpornနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းကုထုံး။ အပြုအမူကုထုံး, 41, 285-295 ။ https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.06.002.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Weinberg, MS, Williams, CJ, Kleiner, S. , & Irizarry, Y. (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 1389-1401 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-009-9592-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Weiss, R. (2015) ။ လိင်စွဲ: ငြင်းပယ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်း။ မှရယူရန် www.addiction.com.
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2018) ။ ဂိမ်းရောဂါ။ မှရယူရန် http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/.
Wright, PJ (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် 12-Step သက်တူရွယ်တူများနှင့်ထောက်ခံဆက်သွယ်ရေးစပွန်ဆာ: တစ်ဦးက Cross-ကြံ့ panel ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 17, 154-169 ။ https://doi.org/10.1080/10720161003796123.CrossRefGoogle Scholar
Wright, PJ (2011) ။ Community ဒိုင်းနမစ်နှင့်လိင်စွဲလမ်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ: ထိန်းချုပ်မှုသီအိုရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်တစ်ခုကကိုက်ညီမှုပွား။ ဆက်သွယ်ရေးလပတ်, 59, 395-414 ။ https://doi.org/10.1080/01463373.2011.597284.CrossRefGoogle Scholar
Wright, PJ (2018) ။ လိင်ပညာရေး, လူထုအမြင်နှင့်ညစ်ညမ်း: တစ်ဦးကခြွင်းချက်ဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 23, 495-502 ။ https://doi.org/10.1080/10810730.2018.1472316.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Wright, PJ, Bae, အက်စ်, & Funk, အမ် (2013) ။ ဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသမီးများနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများ - ထိတွေ့မှု၊ သဘောထားများ၊ အပြုအမူများ၊ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 42, 1131-1144 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-013-0116-y.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Wright, PJ, & McKinley, CJ (၂၀၁၀) ။ ကောလိပ်အတိုင်ပင်ခံစင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလိင်ဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်သောကျောင်းသားများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ - အမျိုးသားနမူနာတစ်ခုမှရလဒ်။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 15, 665-678 ။ https://doi.org/10.1080/10810730.2010.499596.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Wright, PJ, Sun, C တို့, & Steffen, N. (2018) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်ဂျာမနီတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်. https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1462278.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Wright, PJ, Tokunaga, RS, Kraus, အေ, & Klann, အီး (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသုံးစွဲမှုနှင့်ကျေနပ်မှု။ Meta-analysis ။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 43, 315-343 ။ https://doi.org/10.1111/hcre.12108.CrossRefGoogle Scholar